Muuri News Network » XASUUSO: Maalinta Sanadguuradii RRA oo ku aadan 6/6/2016 una diyaar garoow.(Akhri)
XASUUSO: Maalinta Sanadguuradii RRA oo ku aadan 6/6/2016 una diyaar garoow.(Akhri)
XASUUSO Maalinta 6/6/2016 waa Sanadguuradii Maalintii RRA waxaan rabnaa inaan Qabano Ciyaar lagu maamusayo Maalintaas oo sanadhuuradii 17 aad ee RRA.waxaan la rabaa in la qabto xaflad weyn oo ay kasoo qayb galayaan dhamaan Bulsha weynta Koonfurta Soomaaliya.
Dhamaan bulshaweynta KG waxaa laga codsanayaa inay ka qayb qaataan Xafladaasi oo ay kasoo qayb galayaan Halgamayaasha RRA , iyadoo lasoo Bandhigi doono Filim ka hadli doono Taariikhda RRA ee .(6 DEL 6)
Tan kale waxaa Magaalada Baydhabo jooga halgamayaal iyo halgamayaashii geeryoodey Xaasaskooda /Caruutooda , markaa waa in Maalintaas laga faraxsiiyo
Ka qayb qaado Xafladaas si xaflada u noqato xaflad weyn ka qayb qaado walaal xiligaas waxaa ku aadan Bisha Barakeysan ee Ramadaan.
waana in la taakuleeyaa dhamaan Halgamayaashii ku dhaawacmey Dagaalkaas iyo Xaasaskii iyo caruurtii ay katageen .
Magaalada Baydhabo waxaan Maalinta Berito sameynaynaa Gudi abaabulka Xafladaas kaasoo ay ku jiraan Masuuliyiin RRA iyo Gudi Qurbojoog oo ay ku jiraan Warbaahinta ..
Markaa waa in xuska sanadguurada RRA ay noqataa mid aan qiimeyno sanad waliba ayaa maanta waxaa warbaahinta Baydhabo ka hadlay Dr.Idriss Cabdi Dhaqtar , isagoo sheegey in dhamaan bulshada ay ka qaybqaataan Xafladaas oo nagu soo food leh waayo waa Maalintii aan helney Halgamayaa taariikh leh iyo Hogaan Wanaagsan , Dr Idriss ayaa sheegey in 61 Xildhibaan ee DF saami ahaan ay keeneyn Halgamayaasha RRA oo uu hormuudka u ahaa Xasan Maxamed Nuur Shaatigaduud.
Walaalayaal Maalintaa inta aan lagaarin waxaa loo baahan yahay Abaabul iyo Qiimeyn inaan weyneyno Maalintaas. waxaan kaloo diyaariney Cayaar kubad cagta ah oo ay Ciyaari doonaa Kooxaha Badbaado iyo Aboosharow oo heysata koobka sanadkan
Idriss Cabdi Dhaqtar
Gudoomiyaha Jaamacada Upper Jubba University ahna Gudoomiye ku xigeenka Golaha badbaadada KG